Koety: Hetsi-panoherana Enti-manohitra Ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2011 12:55 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, বাংলা, Ελληνικά, Português, Español, English
@abdullahahmad81: Teo anelanelan'ny Kianjan'Irada sy ny Kianjan'ny Safat, nivondrona tamin-pahavononana goavana sy fanahy madio mitaky ny fiovàna tsara ny tanora. Ny sasany manontany tena, hatramin'ny oviana ny Zoman'ny Hatezerana no tokony hitohy?
@q87ar: Miandry ny vahoaka Koetiana rehetra hanohitra sy hanao fitorevahana any Safat na Irada ve i Nasser Al-Mohammed vao hiala ho an'ny fahasoavan'i Koety?
@aladly: Ireo tanora nandia fianarana, izay te-hanoritra ny hoavin'ny politikan'ny firenena, dia tsy manana ny fran'izay tsotra indrindra amin'ny fifanakalozan-dresaka ka dia very teo anelanelan'ny Kianjan'Irada sy Safat.
@aqeelov: i Walid Al-Tabtabi izay nihizingizina ny hanao ny hetsi-panoherana any amin'ny kianjan'ny Safat, dia nanohitra izany fihetsika izany tamin'ny 2006 tao anatina fanontaniana navantana ho an'ny governemanta!
@DrAlajmi: Misy kianja maro aty amin'ny fireneko; Safat, Irada, Tahrir, Horiya, Al-Alam, Taghier, Majles.. kianja fito ary kabinetra fito.. maro ireo kianja fa ny tanjona dia iray ihany .. Mialà.
@A_Alshaibani: Kianjan'ny Safat: no kianjan'ny tanora – ny kianjan'ny fanaovana hetsi-panoherana milamina – ny kianjan'ny fahalalahana miteny – ny kianjan'ny lalàmpanorenana – ary ny kianjan'ny maritiora.
Ilay Koetiana mpitoraka bilaogy, Hamad, dia nanoratra lahatsoratra manombana ny toerana misy ilay Minisitry ny Atitany manoloana ireo mpanohitra. Maro ireo nidoka ny fanapahan-kevitry ny minisitra amin'ny tsy hifandonana amin'ireo mpanohitra na dia niditra ny kianjan'ny Safat aza izy ireo. Hamad, kosa, miteny fa tsy milaza marina amintsika ny toerana misy ny minisitra izany:
Nanoratra lahatsoratra miaro ny tanora mpanao hetsi-panoherana amin'ireo milaza azy ireo ho tsy tia tanindrazana ilay Koetiana mpitoraka bilaogy Mohammed Alhujailan:
Ny mpitoraka bilaogy hafa, 3ajel, nanoratra lahatsoratra mikasika ny olana momba ny toerana tokony hanaovana ireo hetsi-panoherana: